Eternal Bliss: भारतले नै दिएको गाडी चढेर अतिक्रमणको अनुगमनमा गए नेता
भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिको स्थलगत अवलोकन गर्न गएका छन् हाम्रा सभासद् । तर, दुःखको कुरा, भारतले नै उपहारस्वरूप दिएको गाडी चढेर ।
सभासद्हरूको टोली भारतले उपहार दिएको बस चढेर सोमबार साँझ दाङ पुगेको छ । प्रमुख दलसहित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने १८ दलका नेता टोलीमा छन् ।
भारत सरकारको सहयोग लेखेर भारतीय झन्डा अंकित गाडी दिएको थियोजसको सभासद्ले चर्को विरोध गरे
तर, झन्डामाथि सेतोपोतिएपछि त्यही बस चढेर सीमा अतिक्रमण अनुगमन गर्न गयो सर्वदलीय टोली
संविधानसभाको राष्ट्रिय हित संरक्षण समितिको नेतृत्वमा सर्वदलीय टोली सोमबार बिहान काठमाडौंबाट हिँडेको हो । भारतीय दूतावासले उपहारमा दिएको बा १ ग २२४२ नम्बरको मिनीबस चढेर सर्वदलीय टोली मंगलबार साँझ नै दाङ पुगेको थियो । टोलीको नेतृत्व समितिका सभापति अमिक शेरचनले गरेका छन् ।
भारतीय सीमा सुरक्षाबलले दाङको राजपुर र बेला गाविसका करिब २२ नाकाका हजारौँ नेपालीलाई विस्थापित गरेपछि पीडितहरू देउखुरी क्षेत्रमा शरण लिइरहेका छन् । विस्थापित र अतिक्रमित भूमिको स्थलगत अवलोकन गर्न सर्वदलीय टोली त्यसतर्फ गएको हो ।
सभासद्हरूलाई संविधानसभा तथा संसद्को बैठकमा जान र र्फकन भारतीय दूतावासले करिब एक वर्षअघि पाँचवटा मिनीबस संविधानसभा सचिवालयलाई उपहार दिएको थियो । बसमा भारतको झन्डासमेत राखेर 'भारत सरकारको सहयोग' लेखिएको थियो ।
मिडियामा विरोध भएपछि सभासद्ले तत्कालै ती बस नचढ्ने घोषणा गरेका थिए । सभासद्हरूको चर्को विरोधपछि बसमा लेखिएको 'भारत सरकारको सहयोग' र भारतीय झन्डा सचिवालयले मेटेको थियो । तर, सीमा सुरक्षाको अवलोकन गर्न भने सर्वदलीय नेताहरू तिनैमध्येको एक बस चढेर गएका छन् ।
स्रोतका अनुसार सर्वदलीय टोलीका सदस्यले भारतले दिएको बस चढेको विषयमा बाटामा पनि मजाक गरेका थिए । 'भारतीय विस्तारवादको विरोध गर्न भारतीय गाडी नै चढेर जाने, कस्तो अनौठो ! भन्दै सहभागीले टोलीनेता शेरचनसित ठट्टा गरेका थिए ।
टोलीमा सहभागी एक सभासद्का अनुसार 'भारतीय बस चढेर सीमा अतिक्रमणको अनुगमन गर्न आउने हामी पनि भारतीय दलाल भयौँ' भनेर एक सहभागीले चिच्याएर भनेपछि बसभरि हाँसो गुन्जिएको थियो । माओवादीकै नेता अमिक शेरचनले भारतद्वारा उपहारमा आएको बसको प्रबन्ध गरेको भन्दै टोलीका सदस्यहरूले उनलाई जिस्काएका थिए । शेरचन पनि मुसुमुसु हाँसेर बसेको ती सभासद्ले बताए ।
भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमिको अवलोकन गर्न भारतले नै दिएको बस चढेर गएकामा सहभागी केही सदस्यलाई मन भने परेको छैन । तर, उनीहरूले त्यसको विरोध पनि गरेका छैनन् । 'लाग्न त अनौठो-अनौठो नै लागेको छ । तर, बसमा लेखेको (भारत सरकारको सहयोग) त मेटाइसकिएको छ, हैन र ?' टोलीमा सहभागी कांग्रेस सभासद् ध्यानगोविन्द रञ्जितले नयाँ पत्रिकासित भने । त्यस्तो बसमा जाने कुरा आफूलाई पहिले थाहा नभएको पनि उनले बताए ।
संसद्कै अर्को टोली भने हवाईजहाज चढेर अतिक्रमित भूमिको अवलोकन गर्न गएको छ । संसद्को मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको टोली सोमबार नै त्यसतर्फ लागेको हो । यस टोलीको नेतृत्व समितिका सभापति पदमलाल विश्वकर्माले गरेका छन् ।
दुवै टोलीको दाङ पुगेपछि सोमबार राति मात्रै भेट भएको थियो । आपसी सहमतिअनुसार दुई टोली छुट्टाछुट्टै बाटोबाट स्थलगत अनुगमनमा लागेका छन् । विश्वकर्माले नेतृत्व गरेको संसदीय टोलीले दाङको कोइलावास र शेरचनले नेतृत्व गरेको सर्वदलीय टोलीले बाँकेको कुसुमबाट अवलोकन थालेको छ । दुवै टोली बिहीबार थांग्रा नाकामा भेट्ने कार्यक्रम तय भएको विश्वकर्माले बताए ।
विश्वकर्माको टोली मंगलबार साँझ कोइलावास पुगेको छ । 'हामी यहाँ (कोइलावास) पुगेर स्थानीयवासीसित अन्तर्त्रिया गरिरहेका छौँ,' टोलीनेता विश्वकर्माले फोनमा भने ।
Posted by Happiness Seeker at 11:31 PM